Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Delta dia manohy ny sidina Atlanta-San José tsy miato
Airlines • Airport • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Ny fifandraisana tafaverina amin'ny seranam-piaramanidina be olona indrindra eto an-tany dia manatsara ny fidirana amin'ny seranam-piaramanidina Silicon Valley.
Ny sidina alina dia niainga tao San José tamin'ny 10:55 PM (PST), tonga tany Atlanta tokony ho 4.5 ora taty aoriana tamin'ny 6:30 maraina.
Delta Air Lines hampiasa fiaramanidina Boeing 757 amin'ny sidina San José-Atlanta.
Nampiato ny serivisy Delta Air Lines eo anelanelan'ny SJC sy ATL tamin'ny taona 2020 noho ny areti-mandringana COVID-19.
Manomboka izao hariva izao, ny mpandeha dia hankafy fidirana bebe kokoa sy fanamorana kokoa rehefa manidina avy any San José mankany Atlanta. Ny tompon'andraikitra ao amin'ny Norman Y. Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Mineta San José (SJC) nanambara androany fa serivisy tsy an-kijanona isan'andro ho an'ny Seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Hartsfield-Jackson Atlanta (ATL) manohy ny Delta Air-dalana, Androany hariva.
Ny sidina alina dia niainga tao San José tamin'ny 10:55 PM (PST) niondrana tamin'ny fiaramanidina Boeing 757, tonga tany Atlanta tokony ho 4.5 ora taty aoriana tamin'ny 6:30 maraina (EST).
Ny tompon'andraikitra amin'ny seranam-piaramanidina dia manondro fa ny fifamoivoizana am-pahavaratra mahery, ny sidina miverina, ary ny fisokafan-trano fisakafoanana, fivarotana ary fivarotana dia mampiseho faharetana ho an'ny SJC sy ireo mpiara-miasa aminy. Na dia nanala ny fepetra takiana COVID-19 aza ny State of California, dia mbola takiana ny hisaron-tava ny mpandeha ary manohy mamporisika ny halaviran'ny fiaraha-monina ny seranam-piaramanidina.
"Ny serivisy miverina any Atlanta dia maneho dingana lehibe amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny dia," hoy i John Aitken, Tale ao amin'ny Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Mineta San José. “Fanindroany fanindroany i Delta tao anatin'ny herinandro maromaro, ary nahavita asa be ry zareo tamin'ny famolavolana sy ny fampidirana indray ny tsena lehibe miaraka amin'ny fitomboan'ny volan'ny mpandeha. Hartsfield-Jackson Atlanta International no seranam-piaramanidina be olona indrindra eran'izao tontolo izao, ary faly izahay mifandray indray amin'ny tanànan'ny Atlanta sy ny tambajotran'ireo toerana itodihany. ”
Niverina tao amin'ny lisitry ny serivisy an-habakabaka Delta ao amin'ny SJC i Atlanta taorian'ny fiverenan'ny serivisy tsy an-kijanona any Minneapolis-St. Paul (MSP) avy amin'ny SJC tamin'ny Jolay 19. Nakatona ny serivisy Delta Air Lines teo anelanelan'ny SJC sy ATL tamin'ny taona 2020 noho ny fihenan'ny COVID-19 sy ny fihenan'ny dia.